Xulafeysiga Khayre iyo Yaxye oo sababey is-casilaada Maryan Qaasim
By Abdi Adam Muse
Wasiir Maryan Qaasin ayaa waqtigii la magacaabay illaa is casilideedii 15ka Oktoober, waxay cadaadis dhanka shaqo kala kulmeysay Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Prof. Yaxye oo hadda ah Lataliyaha khaaska ah ee Ra’iisul Wasaaraha.Wasiir Maryan Qaasin ayaa markii la magacaabay waxaa loo dhiibay Wasaarad aan horay u jirin, oo aan laheyn waajibaad iyo mas’uuliyado u gaar ah.
Markii la magacaabay Wasiiradu, waxay Ra’iisul Wasaaraha ku wargalisay in lagu soo wareejiyo Waaxda Maareynta Gargaarka oo qeyb ka aheyd Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Guddiga Abaaraha oo ahaa mid madax banaan. Waxaa hor istaagay labada codsiba Yaxye Cali Ibrahim oo markaas ahaa Xooghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, isla markaana ahaa ku-xigeenka Guddoomiyaha Guddiga Abaaraha.
Markii laga soo eryay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Yaxye wuxuu markiiba ku soo wareegay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha asagoo noqday La-taliye khaas ah. Prof. Yaxye wuxuu hoos keensaday howlihii la xiriiray gargaarka oo idil Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha si asaga iyo Ra’iisul Wasaaruhu ay si toos ah u maamulaan deeqaha gargaarka.
Cabdi Saciid Faarax “Juxa” oo ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa asna lagu waramayaa in uu caqabado badan kala kulmay Ra’iisul Wasaare Khayre, taas oo keeni karta in uu iscasilo. Arrintan ayaa imaaneysa xili Yaxye uu qeybo badan oo ka mid ah howlihii Wasaaradda Arrimaha Gudaha uu ula wareegay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Sida aan ka heleyno illo-wareedyo hoose, ma jiraan wax xiriir ah ama wada shaqayn oo ka dhaxeeya Wasiir Juxa iyo Ra’iisul Wasaaraha. Waxay arrintan daba socotaa dhacdadii Yaxye Cali Ibrahim looga soo eryay Wasaaradda oo salka ku heysa falal musuqmaasuq iyo isdaba-maryeyn shaqo.
Sida aan xaqiijinay, Wasiir Juxa ayaa ku wargeliyey dhowr jeer Madaxweyne Farmaajo in uu iscasilayo balse waxaa diiday Madaxweynaha oo isku dayaya waxa laga yeeli karo shaqsiyaadka ku hareysan Ra’iisul Wasaare Khayre, sida Yaxye oo caqabad ku ah wada shaqaynta hay’adaha dowladda asalkana u ah isku dhexyaaca iyo fowdada sababtay in ay Wasiirad Maryan Qaasin iscasisho.
Fikirkaan waxaa iska leh qoraaga kor ku saxiixan looma tarjumi karo in aragtida Warsdiha Garowe Online, waxaan soo dhoweyneynaa fikirka iyo wararka lagu toosinayo shaqada hay'adaha dowlada
Wararka ayaa sheegaya in booqashada Ra'iisul Wasaare Khayre ay ka dambeysay markii uu...
Khayre: Aduunyadda way diiday in mushaarka aan askarta kaash ku siino
Soomaliya 23.04.2019. 06:58